News - အက္ခရာခြံစည်းရိုးအတွက်အလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
The Times တီထွင်မှုနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများသည်စက်ပစ္စည်းများ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးအထီးကျန်ခြင်းကိုခြံစည်းရိုးတွင်တပ်ဆင်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ထုံးစံခြံစည်းရိုးများအတွက်စက်မှုအလူမီနီယံကော? ကောင်းပါတယ်။ အလွန်ကောင်းသည်! အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စက်မှုအလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းသည်ခေတ်သစ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရန်အဆင်ပြေသည်။ ထို့အပြင်၊ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုယ်ထည်သည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်သံချေးများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းခြံစည်းရိုးကိုမိတ်ဆက်ပါမည်။ အစလူမီနီယံပရိုဖိုင်းခြံစည်းရိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုနားလည်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်ပြပါလိမ့်မည်။
စက်မှုအလူမီနီယံခြံစည်းရိုး၏အဓိကဘောင်သည်များသောအားဖြင့် 4040 နှင့် 4080. များသောအားဖြင့်ကော်လံ၏ထောင့်၊ ထိပ်၊ ဖိအားအမှတ် ၄၀၈၀ ပရိုဖိုင်းကိုအသုံးပြုရန်ခိုင်မာသောနေရာဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျလိုင်းပရိုဖိုင်းများသည်စတုရန်းပေ၊ အချောထုတ်ကုန်များကိုဓာတ်တိုးသည်၊ မျက်နှာပြင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်း ၄.၀ ပြီးနောက်စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံအလုပ်ရုံများသည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၏လုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန်အလူမီနီယမ်အကာအရံခြံစည်းရိုးလိုအပ်သည်။
စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုထုံးစံခြံစည်းရိုးအပြောင်းအလဲနဲ့၏အသုံးပြုမှုကို, တပ်ဆင်အလွန်အဆင်ပြေသည်, connection ကိုအစိတ်အပိုင်းဆက်ကပ်အပ်နှံဆက်စပ်ပစ္စည်းဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တပ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သောယခင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်ဒီဇိုင်းများ၊ အပေါက်ဖောက်များနှင့်ထိပုတ်ပါသည့်ဝါယာများအရကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်သာလိုအပ်သည်။ ခြံစည်းရိုး၏အောက်ခြေသည်အထူးခြေထောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုတပ်။ ရွေ့နိုင်သည်။ အထူးဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အထူးသဖြင့်လွယ်ကူသည်။
ထို့အပြင်အထူးပြုလုပ်ထားသောစက်မှုအလူမီနီယံခြံစည်းရိုးအရန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ များသောအားဖြင့် acrylic၊ အကာအကွယ်အလင်း၊ မီးလျှံနှောင့်နှေးခြင်း၊ အခြားဖောက်သည်များသည် 40 မှ 40 အနက်ရောင်ဇယားကွက်ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ဤအရန်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၎င်းကိုပရိုဖိုင်းအတွက်သီးသန့်ထားရန်အပေါက်ထဲသို့ထည့်ရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်ချောမွေ့သောဆက်သွယ်မှုအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။